Daawo Sawiro Haweeneydii laga soo furtay Burcad Badeeda Soomaalida oo dib ula midowday Qoyskeeda !! | kowtharmedia.com
Home WARAR Daawo Sawiro Haweeneydii laga soo furtay Burcad Badeeda Soomaalida oo dib ula midowday Qoyskeeda !!
Daawo Sawiro Haweeneydii laga soo furtay Burcad Badeeda Soomaalida oo dib ula midowday Qoyskeeda !!
Haweeney Kenyan ah oo dhawaan Ciidamada Nabad Sugida Maamulka Galmudug xoog uga soo furteen Kooxo burcad badeed Soomaali ah ayaa dib ugu sii laabatay dalkeeda, waxa ayna mudo kadib la midowday Qoyskeeda iyo asxaabteeda.
Loise Njoki ayaa markii ay ku laabatay dalkeeda waxaa soo dhaweeyay qaar badan oo kamid ah Qoyskeeda iyo asxaabteeda kuwaa oo ku farxsanaa in ay dib u heshay xuriyadeeda kuna soo laabato dalkeeda iyada oo bad qabta.
Previous PostBooliska Talyaaniga oo “jirdilay” tahriibayaal Dad muhaajiriin oo diiday in fara laga qaado!! Next PostMid kamid ah qoyska Boqortoyada Sacudi Carabiya oo xukun karbaash ah lagu fuliyay!!